2Mucjisada Maamul ee Magaca Muuse
2Mucjisada Maamul ee Magaca Muuse
Tuesday May 29, 2018 - 13:10:50 in by Samiir Cabdi
Intii dunidu ay jirtay Magacani waxa uu soo maray saddex marxaladood oo kala duwan
(#Nebi, #Boqor #Madaxweyne)
Ku soo dhawaaw taariikh nololeed kooban oo ka waramaya ninkii arlada ugu taajirsanaa ama Maansa Muuse ama Boqorkii dahabka. Kalimada Maansa macnaheedu waa (Boqor).
1) Muuse waxa taashka boqornimo ee dalka "Mali” loo cimaamaday taariikhdu markay ahayd 1312-kii; waxana loogu yeedhi jiray Maansa Muuse. wakhtigaasi boqortooyooyinka afrika waxa ay ahaayeen kuwo hodan ah oo barwaaqo sooran ku jiray halka boqortooyooyinka reer yurub ay ahaayeen kuwo la tacaalayey macaluul baahsan iyo dagaalo sokeeye oo aad u qadhaadh.
2) Boqor Muuse waxa uu furtay magaalada "Timbuktu”oo ahayd caasimada tacliinta ee qaarada Afrika oo dhan; waxana uu awooday in uu sii wado fidinta boqortooyadiisa si uu wakhti kooban gudihii u hoggaamiyo Imbaraadooriyad aad u balaadhan.
3) Markii boqor Muuse uu soo xajayey waxa la socday wefdi aad u balaadhan oo indhaha fakaag u diiday. wafdigaas waxa kamid ahaa tobanaan kun oo ciidan, ganacsadayaal, shaqaale iyo adoomo iyo weliba awr lagu soo raray xadi dahab ah oo aad u badan.
4) Intii safarka lagu jiray, kolonyadu kol waxa ay ku yara hakatay "Qaahira” oo wakhtigaas mamaaliktu ay xukumayeen, ayaa boqor Muuse waxa loo sameeyey soo dhaweyn heerkeedu sareeyo, intii uu qaahira joogayna, boqorku waxa uu xadi badan oo dahab ah u qaybiyey dadkii foqorada ahaa. taasina waxa ay keentay badhayse kedis ah, oo waxa hoos u dhacay qiimaha dahabkii reer Masar ay haysteen.
5) Boqor Muuse waxa uu ahmiyad balaadhan siiyey horumarinta magaalada "Timbuktu”; waxana uu dayac tiray wadooyinkeedii, suuqyadeedii; waxana uu dhisay masaajidyo, iskuulaad iyo jaamacado waaweyn.
6) Boqor Muuse waxa uu dhisay masaajidka "Jinjariibar ee "Timbuktu”, kaas oo dhismihiisu taagan yahay ilaa wakhtigan maanta.
7) Boqor Muuse waxa uu geeriyooday 1337-kii kadib Rubuc qarni uu maali xukumaayey; waxana dabadii xukunka qabsaday wiilkiisii "Maqan” (I). Boqor Muuse waxa uu ka tegay imbaraadooriyad barwaaqo sooran ku jirta oo isku filan ah taas oo dabadii sii jirtay sanado aad u badan. waxa uu mutaystay in lagu xasuusto ninkii Mali gayeysiiyey in ay ku naalooto saban barwaaqo.
Fiiro gaar ah: Mucjisada Maamul ee Magaca Muuse, markii koowaad waxaynu aragney in qofkii u horeeyey ee loo bixiyey uu ahaa Nebi alle doortay nabiyulaahi Muuse (C.S) qisadiisa waynu ka dharagsanahay, marka labaad, qof umadiisa dhib ka saaray oo barwaaqo sooran gaadhsiiyey isna waxa uu ahaa boqorkii maansa Muuse, mar saddexaad qofkii saddexaad ee umad maamulkeeda alle gacanta u galiyey waxa uu noqday Madaxweyne Muuse biixi Cabdi, waxa aan rajaynayaa idanka alle in uu Somaliland ka dhigi doono wadan barwaaqo sooran ah sida Maansa Muuse oo kale. Allaahuma aamiin.
Maxamed C/Kariim Axmed (Shiil)
Hawl iyo Higsi Qaran